Igbo, John: Lesson 074 - Nke mkpọlite Lazaros (Jọn 11:34-44) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 074 (The raising of Lazarus)
NKEBI NKE 2 - IHE NDI NA-ENYE IHE‘N'ỤLỌ NCHE (Jọn 5:1 - 11:54)
C - OGE JIZỌS GARA AGA JERUSELEM (Jọn 7:1 - 11:54) Okwu: NKE NDỊ NA-AGBANYA NA NKE MBỤ
4. Ịkpọlite Lazarọs na ihe ga-esi na ya pụta (Jọn 10:40 - 11:54)
c) Nke mkpọlite Lazaros (Jọn 11:34-44)
38 Ya mere Jizos, mb͕e ọ nākwa ude ọzọ nime onwe-ya, ọ biaruru ílì ahu. Ugbu a, ọ bụ ọgba, nkume na-agbakwa ya. 39 Jisus siri, Wepu nkume ahu. Mata, bú nwa-nne nke nwanyi ahu nwuru anwu, si Ya, Onye-nwe-ayi, ub͕u a ka ọnwu di, n'ihi na ọ nwuru anwu ubọchi anọ. , "Ọ bụ na agwaghị m gị na ọ bụrụ na i kwere, ị ga-ahụ ebube Chineke?"
Gburugburu Jeruselem, ndị mmadụ ga-eli ndị ha nwụrụ anwụ n'ime ụlọ e ji nkume wuo ma tinye nnukwu okirikiri dị n'ọnụ ụzọ dị warara. Ọ ga-ekwe omume ịgbanye nkume ahụ n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri ma ọ bụrụ na ha chọrọ imeghe ma ọ bụ mechie ili ahụ.
N'ebe ahụ ka e liri Lazarọs, e liri ya n'oké nkume. Jizọs biaruru nso wee hụ oké egwu ọnwụ. Ọ hụrụ na ọnwụ iwe Chineke wụsara na mmehie niile dị ka ọ bụrụ na Chineke napụtara ndị dị ndụ n'aka ndị na-ebukọrọ ihe. Mana Onye Okike achoghi onwu nke ndi di ndu kama nchèghari na ntughari ha na ndu.
Jizọs nyere iwu ka a tụgharịa nkume ahụ iji gbochi ili ahụ. O juru ndị mmadụ anya n'ihi na emetụ ndị nwụrụ anwụ aka bụ mmetọ nke ụbọchị ụfọdụ. Mwepụta ga amalitelarị mgbe ụbọchị anọ gasịrị. Mata kwusiri iwe, sị, "Onyenwe anyị, ọ bụghị ihe kwesịrị ịkpasu ndị nwụrụ anwụ nsogbu, ọ na-esi ísì." Mata ebee ka okwukwe gi di? I kwuputara na Jizọs bụ Ọkpara Chineke na Mesaịa ma nwee ike ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ. Eziokwu nke ọnwụ na onyinyo ili ahụ emewo ka anya ya kpuchie ma ọ maghị ihe Onyenwe ya chọrọ.
Otú ọ dị, ọ wusiri okwukwe ya ike ma gbaa ume na obi ike ya karịrị ike mmadụ. o Choro nt kwasi obi nke kwesiri ihe n'anya nke ebube Chineke. Jisos ekwughị, "Kwere, ị ga-ahụkwa m na m na-arụ oké ọrụ ebube." O buru uzo gwa ndi neso uzo ya na oria Lazarọs abughi n'onwu, ma obu ebube Chineke (Jọn 11: 4). Jizos maara ihe o ghaghi ime nime ime uche nke Nna Ya. Ọ gbalịrị ịdọrọ Mata anya site n'eziokwu nke ịnwụ ruo n'ebube nke Chineke, nke ekpugheworo maka okwukwe. Ọ bụghị nsọpụrụ nke aka ya ma ebube Nna Ya na otuto bụ nzube ya.
N'otu aka ahụ, Kraịst na-asị gị, "Ọ bụrụ na i kwere, ị ga-ahụ ebube Chineke." Ghọta anya gị pụọ na nsogbu gị na ule gị. Ekwela ka obi amamikpe na ọrịa gị na-emenye gị ụjọ, ma lee Jizọs anya, kwere na ọnụnọ ya, nyefee onwe gị nye ya dị ka nwata na-anakwere nne ya. Ka eme uche ya; ọ hụrụ gị n'anya.
41 Ya mere ha wepuru nkume ahu n'ebe onye ahu nwuru anwu dina. Jizos weliri anya-Ya elu, si, Nna, anamakele Gi na I geworom nti. 42 Amaara m na ị na-ege m ntị mgbe niile, ma n'ihi ìgwè ndị guzo nso ka m kwuru ihe a, ka ha wee kwere na ọ bụ gị zitere m."
Nkwenye nke Martha N'okwu Jizọs, e ji okwukwe nye iwu ya. Ọ gwara ndị nọ n'ebe ahụ ka ha wepụ nkume ahụ. Esemokwu bilitere n'etiti ìgwè mmadụ ahụ. Jizọs ọ ga-abata n'ili ahụ ma gbakwasị ozu ozu ya, ma ọ bụ gịnị ka ọ ga-eme?
Ma Jizọs guzoro nwayọọ n'ihu ili ahụ. O weliri anya ya n'ekpere, na-ekwu okwu okwu. N'ebe a, anyị nwere otu n'ime ekpere Jizọs dere. Ọ kpọrọ Chineke dị ka Nna. Enye kelere Nna ya n'ihi na ndụ ya bụ naanị nsọ na nsọpụrụ nke Nna nke Chineke. O doro anya na kelere Chineke maka ịza ekpere ya tupu a kpọlite ​​Lazarọs n'ezie. Mgbe ndị ọzọ na-akwa ákwá, Jizọs kpere ekpere. Ọ gwara Nna ya ka ọ kpọteghachi enyi ya, ihe ịrịba ama nke ndụ Chineke nke na-emeri ọnwụ. Nna ya kwenyero ma nye ya ike iji zọpụta onye a na-egbu ọnwụ. Jisos kwenyere na aguza ekpere ya. N'ihi na ọ na-anụ olu Nna ya mgbe nile. N'oge nile nke ndụ ya, Jizọs nọgidere na-ekpe ekpere kama lee, o kpere ekpere n'olu dara ụda ka ndị mmadụ wee mara ihe omimi ndị ga-eme n'ebe ahụ. O kelere Nna ya mgbe nile n'eza ekpere ya. Ọ dịghị mmehie na-ekewapụ ha, ọ dịghị ihe mgbochi bilitere n'etiti ha. Ọkpara ahu adighi etinye aka n'olu nke aka ya, obughi ichu otuto nye onwe ya, ma obu ike nke ike n'ihi onwe ya. Nna zuru oke na-arụ ọrụ n'ime nwa. Nna ya ga-akpọlite Lazarọs n'ọnwụ. Ihe a nile ka Jisos kwuputara n'iru ndi mmadu ka ha we mara na Nna zitere ya Okpara ya. Ya mere, nbilite n'onwu Lazarọs bu otuto nye Nna ya, ihe iriba ama nke idi n'otu.
43 Mb͕e o kwusiri nka, o were oké olu tie nkpu, si, Lazarọs, puta. 44 Onye ahu nwuru anwu putara ákwà-ọkiké n'aka-ya na ukwu-ya abua; Jisus si ha, Naputara Ya, we zilaga Ya.
Ozugbo Jizos tiri nkpu, "Lazarọs puta", mgbe o nyechara Chineke otuto, onye nwuru anwu nuru (mgbe ndi nwuru anwu anugh ihe obula). Àgwà mmadụ adịghị ala n'iyi mgbe ọ nwụrụ. N'eluigwe, edere aha ndi kwere ekwe. Oku nke Onye Okike, olu nke onye mgbapụta na mkpali nke Mmụọ na-enye ndụ na-abanye na ala ala ọnwụ.
Dị nnọọ ka Mmụọ Nsọ na-atụgharị na mmalite n'etiti ọchịchịrị, na-eke usoro n'usoro ọgba aghara.E ji Lazarọs na-anụ olu Jizọs na irube isi. N'ili ahụ ọ nụrụ ma rube isi site na okwukwe. Ụkpụrụ ndụ Kraịst batara n'ime ya; obi ya malitere ịkụ aka, anya ya meghere, aka ya amalite.
Ọzọ, ọkara nke abụọ nke ọrụ ebube ahụ mere, n'ihi na agbụchiwo Lazarọs n'úkwù. Nwoke ahụ nwụrụ anwụ dị ka ikpuru na chrysalis, enweghị ike iche ihe ọ bụla. Ọ pụghị ịkwaga aka ya agbụ iji kpochapụ ihe na-ekpuchi ihu ya. N'ihi ya, Jizọs nyere ha iwu ịtọhapụ ya.
All ju ha anya ịhụ Lazarọs 'acha ihu; ọ na-akpụ akpụ n'agbanyeghị agbanyeghị ya. Ha niile legidere ya anya ka ọ na-abịakwute Jizọs.
Lazarọs jere ije n'etiti ìgwè mmadụ ahụ n'ụlọ ya. Jọn agwaghị anyị ihe ọ bụla banyere ikpọ isi ala ndị nọ n'ihu Jizọs, ma ọ bụ banyere anya mmiri nke ọṅụ ma ọ bụ na-ekwenye. Ozoghi kwa ka o jiri tita nka na owuwe nke ndi kwere ekwe nye Jizos n'oge nbiabia ya nke ugbo abua. Ihe a niile dị mkpa. Jọn na-ese onyinyo Jizọs, onye na-enye ndụ n'ihu anyị ka anyị wee kwere ma nweta ndụ ebighi ebi. Jọn onye na-ezisa ozi ọma, nọ n'etiti ìgwè mmadụ ahụ, site n'okwukwe ọ hụrụ ebube Chineke nime Ọkpara ahụ, n'ihi na ọ nụrụ olu Kraịst ma nyefee ike ya. Ùnu esiwo na ndi nwuru anwu bilie site n'okwukwe nime Kraist?
EKPERE: Ezigbo Onyenwe anyị Jizọs, ekele gị maka ịkpọlite Lazarọs n'aha Nna gị. Unu onwe-unu esiwo na ndi nwuru anwu bilie. Anyị na-ekele gị maka ndụ gị nime anyị. Ọ bụ okwukwe ka anyị ji soro gị bilie. Anyị na-arịọ gị ka ị kpọlite ndị nwụrụ anwụ n'etiti mba anyị, na ndị na-ekweghị ekwe nwere ike ịtụkwasị gị obi, na n'ime gị na ịnata ndụ ebighị ebi.
Olee otú Chineke otuto-egosi na mkpọlite a Lazaros?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:24 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)